Saynisyahan 13 Jir Oo Kasoo Jeeda Qaarada Afrika ah Oo Aqalka Cad Lagu Casuumay | Hawraar
Saynisyahan 13 Jir Oo Kasoo Jeeda Qaarada Afrika ah Oo Aqalka Cad Lagu Casuumay
Wiil 13 jir ah oo magaciisa la yidhaa Simon-peter Frimpong, una dhashay dalka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika, ayaa lagu casuumay Guriga Cad ee looga taliyo dalka Maraykanka.
Inankan yar oo waqtigan ku nool magaalada Aurora ee Gobolka Colorado ee dalka Maraykanka, waxa uu ka mid noqday 100 arday oo isugu jira saynisyahanno, tiknoolaji, injineerro iyo xisaabyahan (STEM) oo ka kala yimi magaalooyinka Ameerika.
Ardaydan yaryar, waxa ay ka mid noqdeen dadka ugu dambeeya ee Madaxweyne Obama kula kulmi doono Aqalka Cad (Hands-on Showcase), gaar ahaan waxa uu ka mid ahaa wiilkan yar hal-a-buurrada wax-ka-beddelka sameeyey intii ay wax baranayeen, dunidana wax ku soo biiriyey.
Mr. Simon-peter iyo laba arday oo ay wada dhigtaan dugsiga, ayaa lagu dhiirrigeliyey in ay la shaqeeyaan xarunta ciidammada cirka ee Buckley Air Force Base oo sheegtay in ay u baahan tahay lugaha dadka curyaama loo xidho (Prosthetic limb).
Saddexdan saynisyahan waxa ay nashaqdeeyeen, sameeyeena lugo artafiishal ah oo loo isticmaalayo komubyuutar, isla markaana noocoodu yihiin 3-D, iyagoo sidoo kalena warraysiyo ka qaaday dad isticmaalay lugahooda, iyadoo macalimiintooduna aad uga yaabeen kartida carruurtani ku sameeyeen cagaha amma lugaha dadka curyaamiinta ah ku socon karaan.